China 30L 50L 100L Vulsum Emulsifying igwe ihe eji eme ihe na onye n’enye ya | Maxwell
Igwe na-emechi Aerosol
Igwe eji agbaze mmanụ
Ikpo inggwakọta Tank
Ngwakọta dị elu
Igwe eji eme nri
Ntụ ntụ igwekota
Mechie igwe mkpuchi
Ngwunye Tube na igwe Nchikota
Vupum okpukpu abụọ Planetary igwekota
Ihe mkpuchi Emulsifying Emulsifying
Igwe ihe eji egwu mmiri
1000 L Vacuum Emulsifying igwekota
Ngwakọta Emulsifying Emble 100L 200L L
30L 50L 100L Vulsum Emulsifying igwekota
A na-emepụta Vacuum Emulsifying Mixer site na Wuxi maxwell Automation Technology Co., Ltd. Ọ bụ ihe pụrụ iche maka ụlọ nyocha nke ịchọ mma, ọgwụ, ọgwụ kemịkalụ kwa ụbọchị, nri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụdị igwe anyị sitere na nka na ụzụ sitere na Germany na ,tali, igwe anyị dị mfe iji rụọ ọrụ, dịkwa mfe maka mmezi, ọnụahịa bụ nwere ezi uche, akụkụ niile na-eji akara ama ama na China ma ọ bụ na ụwa.
Nkeji Nkem: 100 Ibe / Mpekere 100
Ike ọkọnọ: 10000 Ibe / achịcha kwa ọnwa
A na-ejikarị igwekota ihe nchekwa igwe na-eji VEM-10L eme ihe n'okpuru ala.
Ihe ịchọ mma: cream face, cream hand, cream sunscreen, eyelid to cream, jel hair, lotion, shampoo bath, ntu nauseur, conditioner ntutu wdg.
Lọ ọrụ na-emepụta ọgwụ: otite, sirop, nri, ihe ndị na-eme bio, mado nke ọgwụ wdg.
Uselọ ọrụ eji eme ihe kwa ụbọchị: akwa nhicha, ncha, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ncha, isi wdg.
Industrylọ ọrụ nri: sauces, jam, chocolate, bọta, protein nri, protein anụmanụ.
Industrylọ ọrụ kemịkal: Ihe osise, ụcha, ihe e ji esiji ákwà, ụcha, ihe na-egbu egbu na ihe ndị ọzọ.
Usoro Arụ Ọrụ:
Laboratory Vacuum Emulsifying igwekota
Emume mmuta igwe eji VEM-10L
Debe ihe ndị ahụ na mmiri mmanụ a na-eburu mmiri na mmiri mgbe a kpochara ya ọkụ ma gwakọta ya na mmiri ya na mmanụ ya, ọ nwere ike ịdọnye ihe ndị ahụ n'ime ite mmiri site na mgbapụta ikuku. Ptmịpụta nsị nke etiti na Teflon scrapers dị na emulsifying tank nke na-ekpochapụ ahịhịa ndị dị na mgbidi nke tank iji mee ka ihe ndị a kpochapụrụ bụrụ ihe ọhụụ. Mgbe ahụ ihe ndị ahụ ga-ebipụ, na-agbakọ ma na-etekọta ya site na UM UBARA iji kpasuo, gwakọta ma gbaga homogenizer. Site na nbipu siri ike, mmetụta na ọgba aghara dị ugbu a site na akwa ọsọ na-agba ọsọ na ikpere nke nwere, a na-ebipụ ihe ndị ahụ na interstices nke stator na rotor ma tụgharịa na 6nm-2um ngwa ngwa. N’ihi na emulsifying ahụ na-arụ ọrụ n’okpuru ọnọdụ ikuku, a na-ewepụ ube ndị na-emepụta n’usoro agwakọta n’oge.
Nke gara aga: 5 / 10L Lab Vacuum Emulsifying Mixe
Osote: Ngwakọta Emulsifying Emble 100L 200L L
500L Vacuum Planetary igwekota
Ngwuta Tube Na igwe
Chemicallọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-akụ ọgwụ M ...
Maka teknụzụ ma ọ bụ mgbe azụsịrị ire
okwu:NO.2-300 BLOCK4, AKWCHKWỌ PARK, CHANGJIANG ROAD34 #, DISGBỌ ỌZỌ ỌZỌ, WUXI, JIANGSU PROVINCE, CHINA